Rastrabani.com | कता जाँदै छ महिला आन्दोलन ? - Rastrabani.com कता जाँदै छ महिला आन्दोलन ? - Rastrabani.com
– बबिता बस्नेत-
रेखा शर्मादेखि उषा गुरुङ हुँदै नवीना लामासम्म प्रत्यक्षमै उठ्न चाहन्थे, अलि दबाब दिन सकेको भए थप महिला आउन सक्थे भन्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको अर्थमा अब महिला आन्दोलन किन चाहियो र भन्ने पनि कतिलाई लागेको हुन सक्छ । तर, अबका दिनमा महिला आन्दोलनका एजेन्डा झन् धेरै छन् । एजेन्डा मात्र होइन चुनौतीहरू पनि छन् । हिजोसम्म समानताका लागि मात्रै लड्दै आएका अधिकारकर्मी अब आत्मसम्मानका लागि रणनीतिक हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘महिला भएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ’ भन्ने अवस्थाको सिर्जना जसरी हुँदै छ, यो स्थापित हुँदै गयो भने महिलाको आत्मसम्मान नै कहाँ रहन्छ र ? त्यसैले आत्मसम्मानपूर्ण समतामूलक समाजको निर्माण अबको चुनौती हो । -घटना र विचारबाट